အစွဲအလမ်းကြီးတဲ့ ဒန်နီရယ်ဂျိမ်းစ် ရဲ့ ကံကောင်းစေတဲ့ အရာက ဘာများလဲ . . . - SPORTS MYANMAR
အစွဲအလမ်းကြီးတဲ့ ဒန်နီရယ်ဂျိမ်းစ် ရဲ့ ကံကောင်းစေတဲ့ အရာက ဘာများလဲ . . .
ဘောလုံး သမား တွေဟာ အစွဲ အလမ်း ကြီးတတ်ကြ ပါတယ် ။ ဒီ အထဲ မှာ မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ တောင်ပံ ကစား သမား အသစ်လေး ဒန်နီရယ် ဂျိမ်းစ် လည်း တစ်ယောက် အပါ အ၀င်ပါ ။ ဂျိမ်းစ် ရဲ့ အစွဲ အလမ်းကြီးမှု က သူ့ အတွက်တော့ မသက်သာ စေခဲ့ ပါဘူး ။ အပတ်စဉ် ပွဲ မကစားခင် တိုင်း မှာ မိုင် ၄၀၀ နီးပါး ရှိတဲ့ ခရီးကို ဖြစ်စေ တဲ့အတွက် နည်းပြ ဆိုးရှား အတွက် တော့ စိတ်ပူ စရာ ဖြစ်လာ စေဖို့ ရှိ နေ ပါတယ် ။
ဂျိမ်းစ် ရဲ့ အစွဲ အလမ်း ကတော့ ဆံပင် ညှပ်တာ ပါပဲ ။ မန်ချက်စတာ မြို့ကို ရောက်လာ ခဲ့ ပေမယ့်လည်း ဒန်နီ ရယ် ဂျိမ်းစ် ဟာ အပတ်တိုင်း လိုလို ဝေးလ် နိုင်ငံ ကို ပြန်ပြီး ဆံပင် ညှပ်လေ့ ရှိပါတယ် ။ သူ သွားတဲ့ ဆိုင် ကတော့ ဆွမ်းဆိ မြို့ မှာ တည်ရှိ ပြီး ရွိုင်းဘဲလ် ဆိုတဲ့ ဆံသဆရာ တစ်ဦး ဖွင့်လှစ် ထားတဲ့ ဆိုင်ဖြစ်တယ် လို့ သိရပါတယ် ။
အဆိုပါ ဆိုင် ဟာ ဆွမ်းဆိ မှာ ကစား ခဲ့စဉ် တစ်လျောက် လုံး ဒန်နီရယ် ဂျိမ်းစ် အားပေး လာခဲ့တဲ့ ဆိုင် ဖြစ်ပြီး ဆွမ်းဆိ စီးတီး မှာ ကစား ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်တာ လုံးမှာ ဘဲလ် ရဲ့ ဆိုင် မှာပဲ အားပေး ခဲ့တယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။ ဂျိမ်းစ် က ဒီလိုမျိုး တသမတ် တည်း ဆံပင်ညှပ် တာဟာ သူ့ရဲ့ ခြေစွမ်း အပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိတယ် လို့ ယုံကြည် ထားပြီး အင်္ဂလန် ကို ပြောင်းရွှေ့သွား သည့်တိုင်အောင် ဝေးလ် ကို ပြန်ကာ ဆံပင် ညှပ် နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဂျိမ်းစ် ဟာ ယခု နှစ် နွေရာသီ မှာ မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဆီ ပေါင် ၁၅ သန်း ဖြင့် ပြောင်းရွှေ့ ရောက်ရှိ လာခဲ့ သူဖြစ် ပြီး အသင်း သစ် အတွက်၅ ပွဲ ကစား ထားရာမှာ ၃ ဂိုး သွင်းယူ ထားပေး ခဲ့ပြီး လည်း ဖြစ် ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ဂျိမ်းစ် ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ် အတွင်း ကစား ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံ တကာ ပွဲ ကာလ မှာ လည်း ဝေးလ် လက်ရွေးစင် အသင်း အတွက် တစ်ဂိုး သွင်းယူ ပေးထား နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
“ဒန် က သူ့ရဲ့ ဆံပင် နဲ့ ပတ်သက် ပြီး အလေးထား တဲ့ သူပါ ။ ရွိုင်း က လွဲရင် အခြား ဘယ်သူ့ကို မှ ဒန် က ယုံကြည်မှု မရှိ ပါဘူး ။ ဘယ်လို အခြေ အနေ မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပွဲ မကစားခင် မှာ ရွိုင်း နဲ့ ဆံပင် ညှပ် လေ့ ရှိ ပါတယ် ။ ဒါက သူ့ရဲ့ ခြေစွမ်း ကို ပိုမို ကောင်းမွန် စေသလို ကံလည်း ပိုကောင်း စေတယ် လို့ ဒန်က ယုံကြည် ထားပါတယ်” လို့ ဒန်နီရယ် ဂျိမ်းစ် ရဲ့ မိတ် ဆွေ တစ်ဦး က သူ့ရဲ့ ဆံပင်ညှပ် ဇာတ်လမ်း ကို ပြန်ပြောင်း ပြောပြ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒန်နီ ရယ် ဂျိမ်းစ် ဟာ လက်စတာ စီးတီး နဲ့ ပွဲ မှာ ဒဏ်ရာ ရရှိ ခဲ့တာ ကြောင့် ကြာသပတေး နေ့က ကစား ခဲ့တဲ့ အက်စတာနာ နဲ့ ယူရိုပါလိဂ် ပွဲစဉ် ကို လွဲချော် ခဲ့ရ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဂျိမ်းစ် ဟာ ယနေ့ ည မှာ ယှဉ်ပြိုင် ကစားမယ့် ၀က်စ်ဟမ်း အသင်း နဲ့ ပွဲစဉ် အတွက် လန်ဒန် ကို ခရီး ထွက် ခွာ လာတဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းသား စာရင်း မှာ တော့ ပြန်လည် ပါဝင် လာခဲ့ပြီး အသင်း အတွက် ပြန်လည် ကစား ပေးနိုင် ဖွယ် ရှိတယ် လို့ သုံးသပ် ထားကြ ပါတယ်
အစှဲအလမျးကွီးတဲ့ ဒနျနီရယျဂြိမျးဈ ရဲ့ ကံကောငျးစတေဲ့ အရာက ဘာမြားလဲ . . .
ဘောလုံး သမား တှဟော အစှဲ အလမျး ကွီးတတျကွ ပါတယျ ။ ဒီ အထဲ မှာ မနျခကျြ စတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ရဲ့ တောငျပံ ကစား သမား အသဈလေး ဒနျနီရယျ ဂြိမျးဈ လညျး တဈယောကျ အပါ အဝငျပါ ။ ဂြိမျးဈ ရဲ့ အစှဲ အလမျးကွီးမှု က သူ့ အတှကျတော့ မသကျသာ စခေဲ့ ပါဘူး ။ အပတျစဉျ ပှဲ မကစားခငျ တိုငျး မှာ မိုငျ ၄၀၀ နီးပါး ရှိတဲ့ ခရီးကို ဖွဈစေ တဲ့အတှကျ နညျးပွ ဆိုးရှား အတှကျ တော့ စိတျပူ စရာ ဖွဈလာ စဖေို့ ရှိ နေ ပါတယျ ။
ဂြိမျးဈ ရဲ့ အစှဲ အလမျး ကတော့ ဆံပငျ ညှပျတာ ပါပဲ ။ မနျခကျြစတာ မွို့ကို ရောကျလာ ခဲ့ ပမေယျ့လညျး ဒနျနီ ရယျ ဂြိမျးဈ ဟာ အပတျတိုငျး လိုလို ဝေးလျ နိုငျငံ ကို ပွနျပွီး ဆံပငျ ညှပျလေ့ ရှိပါတယျ ။ သူ သှားတဲ့ ဆိုငျ ကတော့ ဆှမျးဆိ မွို့ မှာ တညျရှိ ပွီး ရှိုငျးဘဲလျ ဆိုတဲ့ ဆံသဆရာ တဈဦး ဖှငျ့လှဈ ထားတဲ့ ဆိုငျဖွဈတယျ လို့ သိရပါတယျ ။
အဆိုပါ ဆိုငျ ဟာ ဆှမျးဆိ မှာ ကစား ခဲ့စဉျ တဈလြောကျ လုံး ဒနျနီရယျ ဂြိမျးဈ အားပေး လာခဲ့တဲ့ ဆိုငျ ဖွဈပွီး ဆှမျးဆိ စီးတီး မှာ ကစား ခဲ့တဲ့ ၅ နှဈတာ လုံးမှာ ဘဲလျ ရဲ့ ဆိုငျ မှာပဲ အားပေး ခဲ့တယျ လို့ သိရ ပါတယျ ။ ဂြိမျးဈ က ဒီလိုမြိုး တသမတျ တညျး ဆံပငျညှပျ တာဟာ သူ့ရဲ့ ခွစှေမျး အပျေါ သကျရောကျမှု ရှိတယျ လို့ ယုံကွညျ ထားပွီး အင်ျဂလနျ ကို ပွောငျးရှသှေ့ား သညျ့တိုငျအောငျ ဝေးလျ ကို ပွနျကာ ဆံပငျ ညှပျ နဆေဲ ဖွဈပါတယျ ။၏
ဂြိမျးဈ ဟာ ယခု နှဈ နှရောသီ မှာ မနျခကျြ စတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ဆီ ပေါငျ ၁၅ သနျး ဖွငျ့ ပွောငျးရှေ့ ရောကျရှိ လာခဲ့ သူဖွဈ ပွီး အသငျး သဈ အတှကျ၅ ပှဲ ကစား ထားရာမှာ ၃ ဂိုး သှငျးယူ ထားပေး ခဲ့ပွီး လညျး ဖွဈ ပါတယျ ။ ဒါ့အပွငျ ဂြိမျးဈ ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျသတ်တပတျ အတှငျး ကစား ခဲ့တဲ့ နိုငျငံ တကာ ပှဲ ကာလ မှာ လညျး ဝေးလျ လကျရှေးစငျ အသငျး အတှကျ တဈဂိုး သှငျးယူ ပေးထား နိုငျခဲ့ ပါတယျ ။
“ဒနျ က သူ့ရဲ့ ဆံပငျ နဲ့ ပတျသကျ ပွီး အလေးထား တဲ့ သူပါ ။ ရှိုငျး က လှဲရငျ အခွား ဘယျသူ့ကို မှ ဒနျ က ယုံကွညျမှု မရှိ ပါဘူး ။ ဘယျလို အခွေ အနေ မှာပဲ ဖွဈဖွဈ ပှဲ မကစားခငျ မှာ ရှိုငျး နဲ့ ဆံပငျ ညှပျ လေ့ ရှိ ပါတယျ ။ ဒါက သူ့ရဲ့ ခွစှေမျး ကို ပိုမို ကောငျးမှနျ စသေလို ကံလညျး ပိုကောငျး စတေယျ လို့ ဒနျက ယုံကွညျ ထားပါတယျ” လို့ ဒနျနီရယျ ဂြိမျးဈ ရဲ့ မိတျ ဆှေ တဈဦး က သူ့ရဲ့ ဆံပငျညှပျ ဇာတျလမျး ကို ပွနျပွောငျး ပွောပွ သှားခဲ့ ပါတယျ ။
ဒနျနီ ရယျ ဂြိမျးဈ ဟာ လကျစတာ စီးတီး နဲ့ ပှဲ မှာ ဒဏျရာ ရရှိ ခဲ့တာ ကွောငျ့ ကွာသပတေး နကေ့ ကစား ခဲ့တဲ့ အကျစတာနာ နဲ့ ယူရိုပါလိဂျ ပှဲစဉျ ကို လှဲခြျော ခဲ့ရ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ဂြိမျးဈ ဟာ ယနေ့ ည မှာ ယှဉျပွိုငျ ကစားမယျ့ ၀ကျဈဟမျး အသငျး နဲ့ ပှဲစဉျ အတှကျ လနျဒနျ ကို ခရီး ထှကျ ခှာ လာတဲ့ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျးသား စာရငျး မှာ တော့ ပွနျလညျ ပါဝငျ လာခဲ့ပွီး အသငျး အတှကျ ပွနျလညျ ကစား ပေးနိုငျ ဖှယျ ရှိတယျ လို့ သုံးသပျ ထားကွ ပါတယျ